ACCRINT(Kennaa; Dhala jalqabaa; Kuufama; Makkii; paarii; firkuweensiin ;Bu'uura)
Paarii gatii baarii ittisaati.
0 ykn dhiisuu
AMORDEGRC(gatii; guyyaa gurgurame;yeroo duraa; kan balaarraa hafe; yeroo;maakkii;Bu'uura)
BU'AA QABEESSA(Nom; P)
=EFFECTIVE(9.75%;4) = 10.11% Kanaafuu reetiin dhalaa waggaa 10.11% dha.
DB(Gatii; Salveejii; Jiruu; Yeroo; Ji'a)
Sirni kompiiyuutaraa gatii jalqabaa safartuu maallaqaa 25'000 ta'e waggaa sadii keessatti kuufammuu qaba.Gatiin salveejii safartuu maallaqaa 1,000 ta,uu qaba. Yeroon tokko guyyoota 30 dha.
=DB(25000;1000;36;1;6) = 1,075.00 safartuu maallaqaa
Dippirisheeshiniin kuffisuu-dhaabbataa sirna kompiiyuutaraa safartuu maallaqaa 1,075.00 dha.
DDB(Gatiis Salvage; Liriod; Hirmaataa)
DISC("Qubannoo"; "Bilchina"; Gatii; Mugoota Kanfaluu; Hundee)
DURATION_ADD("Qubannoo"; "Bilchina"; Boonoo; Kenna; Ammamtaa; Hundee)
RECEIVED("Kuufama"; "Bilchina";Inveestimentii; Gatii hir'ate;Bu'uura)
PV(Makkii; NPer; Pmt; FV; Gosa)